Cut The Rope's Om Nom lasa biby fiompy virtoaly | Vaovao IPhone
Ny lalao andiana fahaizan'ny Cut the Rope dia nanjary nalaza be. Ilay mini monster protagonist mahery an'ny lalao dia efa hanao ny dingana farany hahazoana laza. Tsy ho ela, raha ny fanadihadiana natao ho fampandrosoana ny lalao, hanana ny fampiharana azy manokana. Ireo drafitra vaovao ananan'izy ireo ao amin'ny TouchArcade ho azy dia kintan'ny fampiharana biby fiompy virtoaly.
Ny fahatongavan'i Om Nom, izay iantsoana ilay maherifo, dia kasaina hatao amin'ny herinandro ho avy, raha ny filazan'ny mpamolavola ny ZeptoLabs dia andrasana ny fandefasana ny biby fiompy virtoaly vaovao. Amin'ity indray mitoraka ity tsy maintsy hikarakara ny biby fiompinay izahay, mikarakara ny zavatra ilaina isan'andro an'ny bibikely tia vatomamy kely. Ny adidintsika aminy dia ny milalao miaraka aminy, manome azy vatomamy ary mitazona azy ho falifaly.
Ny tranonkala ofisialin'ny lalao dia manome antsika fifaninanana, izay vita indray mandeha, dia mampahafantatra antsika fa ho tonga afaka folo andro ny biby fiompinay Om Nom. Ny lalao, araka ny TouchArcade, dia kasaina halefa ny alakamisy 18 desambra ho avy izao. Ao amin'ny lalao, ary sambany amin'ny tantara fohy an'ny Om Nom, ny mahery fo dia miaraka amina monster kely mpihinana vatomamy. Om Nelle no mpiara-miasa aminay maitso.
Ny mpamorona Rosiana ny lalao dia mametraka fatra-pahataparana lehibe miaraka amin'ny saga Cut the Rope. Amin'ny ankapobeny, ny lalao dia efa sintonina in-jato tapitrisa mahery ary misy amina sehatra maro be izy ireo, ao anatin'izany ny iOS, Android, OS X, Nintendo DSi, Nintendo 3DS ary misy aza ny filalaovana solosaina amin'ny alàlan'ny rindranasa tranonkala.
Tamin'ny volana septambra 2012 dia efa nanambara ny ZeptoLabs fa ny tetikasan'izy ireo dia misy ny famoahana vokatra samihafa mifandraika amin'ny Om Nom, ka ity simulator biby vaovao virtoaly ity dia tsy mahatratra antsika tsy vonona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Tapaho ny Om's Rope lasa biby fiompy virtoaly
Tolotra App Store, fampiharana maimaimpoana maimaimpoana maimaimpoana